ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ခရိုနီများ၊ ဦးပိုင်နှင့် တရုတ်အကျိုးစီးပွားကို စိန်ခေါ်ခြင်း..
ခရိုနီများ၊ ဦးပိုင်နှင့် တရုတ်အကျိုးစီးပွားကို စိန်ခေါ်ခြင်း..
ခရိုနီ ဆိုသည်ကို ထူးခြားစွာရှင်းလင်းတင်ပြရန်မလိုတော့ပါ၊ “ကြက်ခရိုနီဟင်းလေးစားချင်လို့ “ ဆိုတဲ့ကာတွန်း ကိုသတိရမိပါတယ်၊ သေချာတာကတော့ မြန်မာပြည်ကခရိုနီဆိုသည်မှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ နဲ့”ပေါင်းစား “ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်..အခွင်းထူးခံ၊အမြတ်ကြီးစား၊ခေါင်းပုံဖြတ် သယံဇာတတွေကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့သဘောထား ၊သူခိုးဈေးနဲ့ရောင်း ၊ ရတဲ့အမြတ်ကို ဝေစားမျှစားလုပ်၊ပြည်သူနဲ့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများကို လှည့်တောင်မကြည့်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊အဲဒီလိုပဲ ခရိုနီတွေလိုလုပ်နေတဲ့ အစိုးရကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလဲရှိပါတယ်၊ ဥပမာကတော့ MEC နဲ့ ဦးပိုင်ပါ..၊ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပေမဲ့ ..လုပ်ရပ်တွေက အဆင့်အတန်းမရှိ၊ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ၊ခရိုနီတွေရော အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပါ တကြိတ်ကြိတ်နဲ့..လုပ်ကိုင်နေကြတာကတော့…သာမန်ကိစ္စမဟုတ်ပဲ..မြန်မာပြည်ရဲ့သယံဇာတထုခွဲရောင်းချမှုတွေ၊နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့..ကြိတ်ဝိုင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ကြတဲ့..ကြီးမားလှတဲ့. စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြီးတွေပါ..။အဲဒါအပြင်..အခွန်ဆိုတာ..ရှောင်စရာမလိုအောင်မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး..လက်ဝါးရိုက်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခရိုနီတွေဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်လူကြီးတိုင်းနဲ့ပလဲနံပသင့်ခဲ့ပြီး…ရွှေလမ်းငွေလမ်းတွေဖေါက်ခဲ့ကြတာတွေအပြင်ပထမမျိုးဆက်စစ်အစိုးရလူကြီးတွေရဲ့သားသမီးအချို့ကိုယ်တိုင်က..ဒုတိယနဲ့တတိယမျိုးဆက်စစ်အစိုးရလူကြီးတွေလက်ထက်မှာ..ခရိုနီလက်သစ်တွေပြန်ဖြစ်နေကြတော့..အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်လုပ်ရပ်တွေကိုအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၅ အရ ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိလာတဲ့ အရပ်သားအစိုးရဟာ ခရိုနီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် သဘောထားမပြတ်သားတာတွေတွေ့ရတာမထူးဆန်းပါဘူး၊တခြား မပြတ်သားနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့..စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်စီမံကိန်း၊စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကိစ္စတွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကျွံထားခဲ့တဲ့တရုတ်ကိုတစ်ဖက်သတ်အလုပ်အကြွေးပြုသလိုဖြစ်နေတဲ့ သယံဇာတတူးဖေါ်ရောင်းချရေးကိစ္စတွေမှာ ခရိုနီတွေ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပုံအပ်ကာစွယ်တော်ရွက်လိုဖြစ်နေကြလို့ပါပဲ..၊
အဲဒီတော့ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ ဟာ ယခင်နအဖ အစိုးရလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့တာကိုသာမက..ခရိုနီတွေနဲ့ ဦးပိုင်၊MEC စတဲ့အဖွဲ့တွေအပြင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိူးစီးပွားကိုပါ သွယ်ဝိုက်ပြီးအကာအကွယ်ပေးနေတယ်လို့ သေသေချာချာတွက်ဆလို့ရပါတယ်။
စစ်အစိုးရနဲ့အရပ်သားအစိုးရရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့“စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့တိုင်းပြည်မတိုးတက်တာ”ဆိုတဲ့စကားဟာလဲ.လေ့လာသူတွေ၊အသိပညာမြင့်မားလာတဲ့ပြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်တော့တာသေချာပါတယ်..၊ခရိုနီတွေနဲ့စစ်အစိုးရမိသားစုဝင်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုသိရတဲ့အချိန်မှာ၊အမြတ်ကြီးစားကိုယ်ကြိုးရှာခဲ့တာကိုသိရတဲ့အချိန်နဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမငဲ့ပဲ ကိုယ်ကြိုးရှာတာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်၊အဲဒီတော့ “စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့မတိုးတက်တာ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ ထန်းလက်နဲ့ကာသလိုပဲဆိုတာအားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ..
ခရိုနီတွေဟာစစ်အစိုးရရဲ့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ဦးသဘောတူလုပ်ဆောင်ပေးရင်းစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့ကိုသူတို့အကြောင်းသိသူတွေက..၊အင်တာနက်စတဲ့မီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်တိုက်ခိုက်တာတွေကို ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာယူပြီးအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာစစ်အစိုးရအရောင်ပြောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး..ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာ လုပ်ငန်းတွေကိုထူထောင်နေကြတာ၊နာမည်ရမီဒီယာလုပ်ငန်းအချို့ကိုစည်းရုံးမွေးစားလွှမ်းမိုးလာတာတွေကိုတွေ့လာရပါတယ်၊ဒါတွေဟာသတိထားရမဲ့အချက်တွေပါ..၊သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့မီဒီယာလက်နက်ကိုပြန်သုံးနေပါပြီ..၊အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလိုနားဝင်ဆိုးတဲ့အသံတွေနဲ့..တိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်ပဲ..၊လူထုအကြိုက်တွေနဲ့ရောထည့်ပြီးလိုချင်တာလေးတွေကိုပါးပါးလေးပုတ်ပြီး ထည့်တာတွေကို တွေ့မြင်လာရပါပြီ..၊Facebookလိုsocialmedia တွေမှာပါ professional Team တွေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့Accont တွေဖန်တီးပြီးဝါဒဖြန့်ချီရေးနည်းတွေကို ပြောင်မြောက်စွာဆောင်ရွက်တတ်လာပါပြီ..၊
တရုတ်ကိစ္စ..ခရိုနီကိစ္စ ဆူပွက်စပြုလာတိုင်း အာရုံပြောင်းသတင်းတွေ.အာရုံလွဲသတင်းတွေပွထလာတတ်တာတွေကို ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်း သတိထားမိလာပါတယ်...။
အဓိကကတော့ ဒေါ်စုကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံတဲ့ထောက်ခံမှုကို လျှော့ကျသွားစေဖို့၊အမှန်အတိုင်းရေးတတ်တဲ့မီဒီယာတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ နဲ့ အတိုက်အခံဘက်ကိုတစ်ဘက်သတ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကို...သူတို့ဘက်ကိုမျှဝေဖို့ပါ၊ အဲဒီအချက်အောင်မြင်မှုရှိမရှိ အင်တာနက်သတင်းဖတ်သူတွေအသိဆုံးပါ၊ ခရိုနီတွေဟာအဲဒီဘက်ကိုငွေအင်အားလူအင်အားများများနဲ့ဖိလာကြပါပြီ။
အဲဒီတော့..ယခင်ကဦးကျော်ဆန်းရဲ့ “မီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်မယ်”ဆိုတဲ့စကားကစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာရှုံးနိမ့်သွားလို့…အခုမှသူတို့ဘက်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဝင်လာသလိုပါပဲ…၊
Comment တစ်ခုထဲရေးသလိုမျိုး သာမန်သူခိုးကတော့ထောင်ကျတယ်၊တကယ့်အကြီးစားသူခိုးတွေကတော့ထောင်မကျတဲ့အပြင်သမ္မတကြီးနားတောင်ကပ်လို့ရတယ် ဆိုတာ…မျိုးတော့မဖြစ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်၊
လူငယ်တွေဟာပညာရေးကိုစိတ်မ၀င်စားတော့ပဲ..ပိုင်ရာဆိုင်ရာရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ..ငွေလွယ်လွယ်ရချင်တဲ့စိတ်တွေရှိနေတာ၊..မြန်မာမိန်းကလေးတွေစာရိတ္တပျက်ပြားပြီး..စပွန်ဆာရှိရင်..တစ်သက်လုံးထိုင်စားရုံပဲ ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊…မာဆတ်နဲ့ကေတီဗီတွေ၊အနှိပ်ခန်းတွေမှာ..လုမှုရေးဦးတည်ချက်ထဲကတမျိုးသားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးတွေ..ကိုဖေါ်ပြနေကြတာတွေဟာဒီခရိုနီတွေကြောင့်ဆိုတာ သိပါလေစ....၊
နောက်တစ်ခုကမြောက်ကိုးရီးယားက လက်နက်ထုတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေပို့တာကိုဂျပန်ဆိပ်ကမ်းမှာမိပါတယ်..၊ အစိုးရပြောခွင့်ရှိသူကပြန်ရှင်းပါတယ်..စိုးမင်းထိုက်ကုမ္မဏီနဲ့သာသက်ဆိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်…
နောက်တစ်ခုကလက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာတွေကြောင့် ရေဒေသခံတွေရဲ့နစ်နာမှုတွေကြောင့်ရော..၊ဆန္ဒပြတာနေကြပါတယ်.၊အဲဒါတွေကိုလဲအခုနှိမ်နင်းနေပါတယ်၊အဲဒီကိစ္စမှာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင် နိုင်ငံတကာရှေ့မှာကတိပျက်တာမျိုးလဲမကောင်းသလိုကိုယ့်ဘက်ကလဲအကုန်လုံးနစ်နာနေတာလဲမကောင်းပါဘူး..ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့အမှိုက်ကစပြသာဒ်မီးလောင်နေရတာပါ။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခဲ့ရင်လဲအိတ်ထဲဘယ်ထည့်လို့ရတော့မှာလဲ၊
ဦးပိုင်ကိုထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှ တပ်မတော်သားအောက်ခြေအဆင့်တွေရဲ့ဘ၀တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲနှစ်ပြားမတန်ဘူးဖြစ်လာတယ်၊
တပ်တိုင်းတပ်တိုင်းမှာလိုက်ကြည့်စေလိုပါတယ်၊ဦးပိုင်ကဘာတွေများပေးထားလဲ၊ဘာတွေပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဖြစ်လာလို့လဲ၊ဦးပိုင်ကတပ်မတော်အတွက်ဆိုရင်ဦးပိုင်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းတွေကိုတောင်အောင်ခြေစစ်သားတွေကို…ရှင်းပြခဲ့တာရှိပါသလား၊မြန်မာစစ်တပ်ကတော့အမေရိကန်တပ်မတော်အဆင့်နဲ့ကိုဆက်ဆံချင်တာတပိုင်းသေနေတယ်..၊အောက်ခြေကတပ်မတော်သားတွေကိုအာဆီယံအဆင့်လောက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့လား..လေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်၊ဦးပိုင်က ရရနေတဲ့ငွေတွေနဲ့စစ်တပ်အောက်ခြေအဆင့်ကိုတကယ်ထောက်ပံ့လို့ရမရသူတို့အသိဆုံးပါ၊
တပ်မတော်ဆိုတာပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့လား၊တပ်မတော်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့လား၊တရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့လား၊ပုဒ်မ ၄၄၅ နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့လား..၊
တကယ်ဆိုဦးဝေလွင်ပြောတဲ့စကားက တပ်မတော်သားတွေကဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအထင်လွဲအောင် "တပ်မတော်နဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့..ပြည်သူကို တေ့ပေးလိုက်တဲ့စကား"ဆိုတာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။
လက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စမှာ..တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တပ်မတော်နဲ့ ဘယ်သူကအကျိုးအမြတ်ပိုရလဲ..၊တို့ခြံထဲကို လက်ဘက်ရည်ဖိုးလောက်ပဲပေးပြီး အိမ်ဝင်ဆောက်ခံရသလိုပါပဲ၊
အဓိကကတရုတ်ကိုမြန်မာ့မီးရထားကပိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းရထားစက်ခေါင်းတွေကိုအလကားပေးလိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်အနေနဲ့နွားငတ်ရေကျဖြစ်ပြီး တရုတ်ကသူ့ရဲ့ရီကွန်ဒေးရှင်းစက်ခေါင်းတွေ(တစ်ချိန်မှာSparepartsနဲ့ငွေပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာတရုတ်ကတွက်ပြီးအလကားပေးနေတာမျိုးတွေ)ပြန်ရတာကိုကျေနပ်နေလို့မရပါဘူး..၊လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၁၀၀ လောက်သက်တမ်းရှိ မော်တော်ကားတစ်စင်းကိုတောင် ကမ္ဘာ့လေလံပွဲတွေမှာ ဒေါ်လာသိန်းသန်းပေါင်း ဘယ်လောက်တွေနဲ့လေလံပစ်နေပါသလဲလေ့လာစေချင်ပါတယ်၊
“ i pad ဟာခွေးလက်ထဲမှာ အမဲရိုးလောက်တောင်အသုံးမ၀င်ဘူး” လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းကဲ့ရဲ့းကြမှာမရှက်ကြဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူပြောတဲ့ကျေးဇူးရှင်တရုတ်ကို.ဖါးချင်လွန်းလို့လား…၊စကားနဲ့ဇာတိ.မပြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်၊
တကယ်ဆိုမြန်မာ့သယံဇာတတွေကြောင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရင်ကမဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့…ယူနန်ပြည်နယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သလို..၊တရုတ်တွေအတွက်..လူကိုပါပို့ပေးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စေတနာကြောင့်တရုတ်မျိုးဆက်တွေမပြတ်ခဲ့တတွေ၊ နာဂစ်တုန်းကတရုတ်ရဲ့ဗီတိုအာဏာနဲ့ကန့်ကွက်မပေးမှာကြောက်ပြီးဧရာဝတီတိုင်းရေနစ်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်မဲ့နိုင်ငံစုံရေတပ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့လို့ကယ်ဆယ်မှုကြန့်ကြာပြီး မသေသင့်ပဲသေရပေးတဲ့သူသိန်းပေါင်းများစွာ..၊အဲဒါတွေကိုကြည့်ရင်တရုတ်ကမြန်မာတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်လား၊မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်လား၊????
တပ်မတော်ကတပ်မတော်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကစ်အာဏာရှင်ပါ၊ တခြားစီပါ၊
အရင်နအဖအစိုးရလက်ထက်က မီဒီယာတွေမှာ ဒေါ်စုတို့ကိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ပုဆိန်ရိုးဆိုပြီး နအဖက၀ါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ်..
ဒီတော့…အရင်ကာလတွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုချေးနိုင်သေးနိုင်နိုင်မှု..အဆီချည်းပဲမျိုထားတာတွေကိုလေ့လာပြီး..ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတာက..အရင်နအဖလက်ထက်ကခရိုနီအချို့အပါအ၀င် အစိုးရသြဇာရှိသူတွေကြားထဲမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုလူမသိသူမသိ သစ္စာခံသူတွေများရှိနေပြီလား…?လို့ ပြန်မေးလို့ရပါတယ်..ဒီသဘောလေးပါ၊
နောက်တစ်ခုကတော့ ခရိုနီ၊ဦးပိုင်၊တရုတ်ကိစ္စတွေရဲ့ဝက်အူရစ်လိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ပြသနာတွေအားလုံးရဲ့အရင်းခံ..နအဖဘိုးဘိုးတွေကိုဒီတိုင်းမထားသင့်တော့တာပါ။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၄၅ ကို ..ဒီလိုပြင်ချင်ပါတယ်..
“ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ယခင် နယက အစိုးရ ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆက်ခံသည့်အတွက်နယကအစိုးရဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြသနာများကိုပြည်သူလူထုကျေနပ်သည်အထိဖြေရှင်းပေးရန်တာဝန်ရှိ သကဲ့သို့၊ နယကမှ ဆောရွက်ခဲ့သည့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေသည့်..တစ်ခြားနိုင်ငံများ၏အကျိုးစီးပွားသက်သက်ကိုသာရည်ရွယ်သည့် လုပ်ငန်း၊စီမံကိန်းများအား..မိနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက် အကျိုးယုတ်စေမည်ဟုယူဆပါက ပြန်လည်စိစစ်ဖျက်သိမ်းပြီး..ထိုစဉ်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူးများအား စုံစမ်းစိစစ်ဖေါ်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်”
လွပ်လပ်စွာ SHARE နိုင်ပါတယ်....
by Pa Yit on Thursday, November 29, 2012 at 3:29pm ·